Ho hitantsika ireo fitaovana mandeha ho azy CHIP automatique voalohany mifanaraka amin'ny Apple, Amazon ary Google amin'ity taona ity | Vaovao IPhone
Eo amin'ny làlana tsara izahay hanatontosana ny rafitra fanamoriana trano. Ny consortium mpanamboatra fitaovana mandeha ho azy ao an-trano CHIP, miaraka amin'i Apple, Amazonary Google eo aloha dia toa efa miova endrika sahady.
Ary raha te hampanara-penitra ireo kaonty fifampiresahana eo amin'ireo marika samy hafa dia hanomboka handefa ny vokariny ireo mpanamboatra ny fikambanana Taratasy fanamarinana CHIP tamin'ity taona ity ihany. Bravo.
Tsy isalasalana fa fandrosoana lehibe ho an'ireo mpampiasa rehetra izay nanomboka tamin'ny sehatra lehibe na kely kokoa «domotize»Ny tranonay. Tsy ho ela ireo fitaovana automatique an-trano voamarina CHIP dia hifanaraka amin'ireo sehatr'asa fanatobiana trano lehibe telo an'ny Apple, Amazon ary Google.
Misaotra ny fikambanan'i orinasa maherin'ny 170 izay nanomboka tamin'ny taona 2019 mba hampanara-penitra ireo rafitra mandeha ho azy ao an-trano ankehitriny, rafitra iray mahazatra no namboarina teo anelanelan'ny fitaovana fanamoriana trano isan-karazany ao an-tranontsika.
Midika izany fa ohatra ny jiro LED izay manana Taratasy fanamarinana CHIP, dia ho mifanaraka amin'ny Alexa, Siri, na OK Google. Hampiasa ilay rafitry ny serasera tsy misy tariby ihany izy ireo ary hifanaraka amin'ireo rindranasa automatique an-trano mifanaraka aminy.
Ny tetikasa CHIP, (Fandraisana mifandray amin'ny IP), dia natomboka tamin'ny tanjona hampiasana ireo modely angon-drakitra HomeKit, Alexa Smart, Google Weave ary Dotdot, mba hanamora ny orinasa hamorona fitaovana an-trano marani-tsaina izay mifanentana amin'ny sehatra rehetra.
Hetsika misokatra malalaka izay mety tsara ho an'ny orinasa roa sy ny mpanjifa ary mampiasa Bluetooth LE hanamboarana ary koa Wi-Fi e Thread ho an'ny fifandraisana.
Ny Verge dia namoaka a tatitra izay manazava fa ny mari-pahaizana CHIP ho an'ny andiany voalohany amin'ny fitaovana ho tonga amin'ny faran'ity taona ity, miaraka amin'ireo fitaovana voalohany.
Ireo fitaovana ireo no ho efa fantatsika, fa mety amin'ny fenitry ny fifandraisana vaovao. Izy ireo dia ho jiro, jiro, fanaraha-maso ny toetrandro, fahitalavitra, hidim-baravarana, mpamoha varavarana garazy, rafitra fiarovana ary Wi-Fi router, ankoatry ny maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » HomeKit » Ho hitantsika ireo fitaovana mandeha ho azy CHIP voalohany mifanaraka amin'ny Apple, Amazon ary Google amin'ity taona ity
Mino aho fa tsy orinasa maro no hifandray amin'ny CHIP, noho izy tsy mampiasa protokol toy ny zigbee na z-wave, sns. Ary ireo protokoloka ireo dia mahatonga azy ireo handeha lavitra ary tsy handany be, koa izy ireo afaka manao switch automatique ao an-trano raha tsy Ny filana tariby tsy miandany dia iray amin'ireo tombony azo amin'ny fampiasana ireo protokolola ireo, ankehitriny ny sendika CHIP dia tsy mampiasa na iray aza amin'ireo protokolola ireo ary tsy mampiasa afa-tsy bluetoo sy wifi, ary na dia manana ny rafitra kofehy aza ampy ary izany no mahatonga ny marika toa an'i Philips tsy hiditra mihitsy ary mahamenatra izany, tsy maintsy namorona protokol toy ny z-gelombang na zigbee ao anatin'ny CHIP izy ireo ary avy eo dia orinasa maro no hanatevin-daharana. Andeha hojerentsika raha toa ka manana birao afovoany iray ihany isika amin'izany fa tsy 40 cents ny marika tsirairay aminy ary raha izany dia tonga ihany koa ireo fitaovana bebe kokoa mifanaraka amin'i Apple, izay ilay kely indrindra foana.
Tsy fantatro hoe inona ny karazana protokol ampiasain'izy ireo ho fenitra, saingy efa misy orinasa mitarika mihoatra ny 170 ao amin'ny consortium, ary ny iray amin'ireo mpanentana ny tetikasa dia izy ihany Zigbee.
Ny vaovao rehetra izay hatolotr'i Apple amin'ny hetsika hataony
Ny horonantsary sarimihetsika Wolfwalkers dia nahazo ny loka 5 Annie